Sin - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fahotana
Ny fahotana dia fandikan-dalàna, toetry ny fikomiana amin’Andriamanitra. Hatramin’ny fotoana nahatongavan’ny ota teto amin’izao tontolo izao tamin’ny alalan’i Adama sy Eva, dia teo ambanin’ny ziogan’ny ota ny olona — zioga izay tsy azo esorina raha tsy amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ny toetra maha-mpanota ny olombelona dia miseho amin’ny fironana hametraka ny tenany sy ny tombontsoan’ny tena ho ambonin’Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny fahotana dia mitarika ho amin’ny fisarahana amin’Andriamanitra sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Satria mpanota avokoa ny olona rehetra, dia samy mila ny fanavotana atolotr’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Zanany koa izy ireo. (1. Johannes 3,4; Romana 5,12; 7,24-25; marika 7,21-23; Galatianina 5,19-21; Romana 6,23; 3,23-24)
Matokia an'Andriamanitra ny olan'ny ota
“Eny, azoko: ny ran'i Kristy no manaisotra ny ota rehetra. Ary fantatro koa fa tsy misy zavatra hafa apetraka. Na izany aza dia mbola manana fanontaniana ihany aho: Raha mamela ny fahotako rehetra Andriamanitra, dia toa izany koa ny ataoko ankehitriny na amin'ny ho avy - inona no tokony hanakana ahy tsy hanota amin'ny votoatin'ny foko? Ny tiako lazaina, tsy misy dikany ve ny lalàna ho an'ny kristianina? Moa ve Andriamanitra tsy hiraharaha izany rehefa manota? Tsy te-hanajanona ahy tsy hanota intsony ve izy? » Fanontaniana efatra ireo - ary tena zava-dehibe koa. Te-hanazava azy ireo tsirairay avy izahay - angamba hisy bebe kokoa.
Voavela ny fahotantsika rehetra
Voalohany indrindra hoy ianao dia nilaza fa fantatrao fa ny ran'i Kristy no mamafa ny ota rehetra. Izay no fomba lehibe. Betsaka ny kristianina tsy mahalala an'izany. Mino izy ireo fa orinasa ny famelana ny fahotana, karazana fivarotana eo amin'ny olona sy Andriamanitra, izay itondran'ny olona iray amin'ny fomba araka an'Andriamanitra ary ny Ray any an-danitra dia mampanantena famelan-keloka sy fanavotana ho valiny.
Araka io modely fisainana io, ohatra, dia mametraka ny finoanao an'i Jesoa Kristy ary manome valisoa anao Andriamanitra amin'ny fanaovana izany amin'ny ran'ny zanany lahy hanavotra ny fahotanao. Tahaka ny tenanao amiko dia toy izany aminao koa. Mety ho tsara izany, saingy mbola fifanarahana, fifanarahana ary azo antoka fa tsy famindrampo toy ny ambaran'ny Evanjely. Araka io maodely fisainana io, ny ankamaroan'ny olona dia latsaka amin'ny fanamelohana satria tara loatra amin'ny ezaka ataon'izy ireo ary Andriamanitra irery ihany no manome ny ran'i Jesosy - ka tsy manompo ny famonjena eran'izao tontolo izao izany.
Betsaka ny fiangonana tsy miala amin'izany. Ny mpino mino dia voatarika hiroso amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana irery; Vantany vao niditra ho mpikamban'ny Fiangonana izy, na izany aza, ny mpino dia miatrika torolàlana andian-dàlana izay arakaraka ny fihetsika tsy mifehy tsara dia azo saziana tsara amin'ny fanilihana - tsy avy amin'ny Fiangonana ihany, fa mety ho avy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra mihitsy aza. Ka dia "voavonjy amin'ny fahasoavana".
Na dia misy antony marim-pototra aza, araka ny Baiboly, handroahana olona iray amin'ny fiombonam-piangonana (nefa mazava ho azy fa tsy avy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra), dia raharaha hafa izany. Amin'izao fotoana izao dia te-hametraka izany amin'ny fanambarana isika fa ao amin'ny faribolana ara-pinoana dia matetika no tsy tian'ny olona mpanota intsony, rehefa misokatra tsara ny varavarana ho azy ireo.
Araka ny filazantsara, i Jesoa Kristy no sorompanavotana tsy noho ny fahotantsika ihany, fa noho ny fahotan’izao tontolo izao (1. Johannes 2,2). Ary izany, mifanohitra amin’izay lazain’ny kristiana maro amin’ny mpitoriny, dia midika fa tena nandray ny tsiny ho an’ny tsirairay avy izy.
Hoy i Jesosy: “Ary Izaho, rehefa asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny rehetra hanatona Ahy” (Jaona 1.2,32). Jesosy dia Andriamanitra Zanaka izay nahariana ny zavatra rehetra (Hebreo 1,2-3) ary ny rany no tena mampihavana ny zavatra rehetra noforoniny (Kolosiana 1,20).
Amin'ny alàlan'ny fahasoavana irery ihany
Ianao koa dia nilaza fa fantatrao fa ny fandaharana nataon'Andriamanitra ho anao ao amin'i Kristy dia tsy azo ovaina amin'ny tombony ho anao. Amin'ity lafiny ity koa, manana tombony amin'ny hafa ianao. Ity tontolo ity dia feno mpitandrina ny fitondran-tena miady amin'ny faharatsiana izay mandefa ireo mpanara-dia azy sahala amin'ny herinandro isan-kerinandro mankany amin'ny làlana iray izay misy hadisoana azo atao, ao anatin'izany dia tsy maintsy mihazona andiana fitakiana sy fanadinana manokana izy ireo ary ny fanarahana tsy fankatoavana tsy tapaka dia miteraka faharetana amin'Andriamanitra. mandrahona, izay ahitan'ny antontam-bary kely rehetra ny loza ateraky ny tsy hijaly amin'ny fampijaliana ny helo ho fahombiazana ara-panahy.
Ny filazantsara kosa dia manambara fa tia ny olona Andriamanitra. Tsy manenjika azy na manohitra azy izy. Tsy miandry azy ireo ho tafintohina izy ka hanorotoro azy toy ny bibikely. Mifanohitra amin’izany kosa fa eo anilany Izy ary tia azy fatratra ka noho ny Sorompanavotan’ny Zanany no nanafahany ny olona rehetra, na taiza na taiza onenany, tamin’ny ota rehetra (Jaona. 3,16).
Misokatra ao amin'i Kristy ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Afaka matoky (mino) ny tenin 'Andriamanitra ny olona, ​​mitodika any aminy (mibebaha) ary manaiky ny lova nomena azy tamin-kalalahan-tanana - na afaka manohy mandà an' Andriamanitra ho Rainy izy ireo ary manao tsinontsinona ny andraikiny ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Manome antsika fahalalahana misafidy ny Tsitoha. Raha mandà azy isika dia hanaja ny safidintsika izy. Ny safidy ataontsika dia tsy ilay nokasaina ho antsika fa mamela antsika hanana fahalalahana handray fanapahan-kevitra manokana.
Nataon'Andriamanitra izay rehetra azony atao. Tao amin'i Kristy dia hoy izy "eny" tamintsika. Ankehitriny dia anjarantsika ny mamaly "eny" amin'ny anjarantsika miaraka amin'ny "eny". Na izany aza, ny Baiboly dia manasongadina fa ny tena mahagaga dia misy olona mamaly ny "tsia" amin'ny tolotra nomeny. Ilay tsy manam-petra, mankahala ary mankahala ny Tsitoha sy ny tenany.
Amin'ny farany, mihambo ho mahalala fomba tsara kokoa izy ireo; tsy mila ny Rainy any an-danitra izy ireo. Tsy manaja an'Andriamanitra na olona ianao. Eo imason'izy ireo, ny zavatra natolony hamela antsika ny fahotantsika rehetra ary hotahiny mandrakizay dia tsy mendrika ho chanterelle, fa fanesoana - tsy misy dikany sy tsy misy lanjany. Andriamanitra, izay nanome ny zanany ho azy ireo koa, dia manamarika fotsiny ny fanapahan-kevitr'izy ireo mahatsiravina mba hitoetra ho zanaky ny devoly, izay tian'izy ireo amin'Andriamanitra.
Izy no mpamonjy fa tsy mpanimba. Ary izay rehetra ataony dia tsy miankina afa-tsy ny sitrapony - ary afaka manao izay tiany. Tsy voafetran'ny fitsipiky ny firenena hafa izy, fa tsy mivadika amin'ny fankasitrahany am-pitiavana sy ny fampanantenany. Izy no iza ary iza izy no tena tiany; Izy no Andriamanitsika feno fahasoavana, fahamarinana ary fahatokiana. Mamela antsika ny fahotantsika Izy satria tia antsika. Izany no tadiaviny, ary izany no ilaina.
Tsy misy lalàna afaka mamonjy
Tsy misy lalàna hitondra antsika ho amin’ny fiainana mandrakizay (Galatiana 3,21). Tsy mankatò lalàna tsotra izao isika olombelona. Afaka miady hevitra mandritra ny tontolo andro isika raha toa ka afaka manara-dalàna ara-teorika isika, saingy tsy manao izany amin'ny farany. Toy izany koa ny taloha ary ho toy izany koa ny ho avy. I Jesosy irery ihany no afaka nanao izany.
Iray ihany ny fomba hahazoana ny famonjena, dia ny fanomezana avy amin’Andriamanitra, izay azontsika raisina tsy misy quid pro quo na fepetra (Efesiana). 2,8-10). Toy ny fanomezana hafa rehetra, dia afaka manaiky na mandà izany isika. Na inona na inona fanapahan-kevitra noraisintsika dia avy amin’ny fahasoavan’Andriamanitra irery ihany izany, fa hitondra soa sy fifaliana ho antsika izany raha tena manaiky izany isika. Resaka fitokisana fotsiny io. Mino an’Andriamanitra isika ary mitodika Aminy.
Fa raha, amin'ny lafiny iray, tena vendrana tokoa isika mandà azy dia hanohy hiaina, malahelo toa azy, ao anatin'ny haizin'ny fahafatesana voafidy, toy ny hoe tsy nahazo antsika mihitsy ny hazavana sy ny fanomezana volamena.
Hafa - safidy
Na iza na iza manapa-kevitra amin’izany fomba izany ka mandà an’Andriamanitra amin’ny tsy firaharahiana toy izany ny fanomezana izay tsy azo vidim-bola - fanomezana izay naloa tamin’ny ran’ny Zanany izay misy ny zavatra rehetra, dia tsy mifidy afa-tsy ny helo. Na izany na tsy izany, dia mihatra amin’ny olona izay misafidy io lalana io sy amin’ireo izay manaiky ny fanomezany koa ny ain’Andriamanitra izay novidiny. Ny ran’i Jesosy no manonitra ny ota rehetra, fa tsy ny sasany ihany (Kolosiana 1,20). Ny sorompanavotany dia natao ho an’ny zavaboary rehetra, fa tsy ampahany amin’izany ihany.
Ireo izay manilika fanomezana toy izany dia lavina tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nanapa-kevitra ny hanohitra izany. Tsy te-ho anisan'izany izy ireo, ary na dia tsy tia azy ireo aza Andriamanitra, dia tsy hamela ny hijanonany any izy, mba tsy handotoany ny fetin'ny fifaliana mandrakizay miaraka amin'ny avonavona, fankahalana ary tsy finoana izay idirany. Noho izany dia mandeha any amin'izay tiany indrindra izy ireo - tonga hatrany amin'ny afobe, izay tsy misy olona mankafy ny fahatsoran'ny tenany manokana.
Nomena famindrampo i Mercy - inona no vaovao tsara! Na dia tsy mendrika an'izany aza isika, nanapa-kevitra ny hanome antsika fiainana mandrakizay amin'ny Zanany Andriamanitra. Minoa na maneso azy. Na izany aza, misafidy isika, dia tena marina izany mandrakizay ary mandrakizay: Tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganan'i Jesosy Kristy dia naneho antsika Andriamanitra amin'ny teny mivaingana hoe ny halehiben'ny fitiavany antsika sy ny halehany dia ny famelana ny fahotantsika sy ny momba antsika. mampihavana azy.
Nanome ny fahasoavany ho an'ny olona rehetra hatraiza hatraiza am-pitiavana izy. Andriamanitra dia manome antsika ny fanomezana famonjena avy amin'ny fahasoavana madio ary tsy mangataka na inona na inona ho valin'izay, ary izay rehetra mino ny teniny sy manaiky azy amin'ny teniny dia afaka mahazo azy tokoa.
Inona no mampiato ahy?
Hatramin'izao dia tsara. Miverina amin'ny fanontanianao indray izahay izao. Raha namela ny fahotako Andriamanitra, na dia talohan'ny nanaovako azy aza, inona no tokony hanakana ahy tsy hanota?
Andeha aloha isika hanazava zavatra iray. Ny fahotana dia mivoaka avy ao am-po fa tsy fitohitohizan-tena fotsiny. Tsy mivoaka avy ao ny ratsy; izy ireo no niaviany tao am-pontsika. Ilaina ny fo mivaingana hamahana ny olantsika, ary ny tokony hataontsika mba hiatrehana ilay olana fa tsy ny fanasitranana fotsiny ny valiny.
Tsy liana amin'ny fitondran-tena mandeha tsy tapaka Andriamanitra. Tiany hitazona ny fifandraisantsika am-pitiavana amintsika. Tia antsika Izy. Izany no antony nahatongavan'i Kristy hamonjy antsika. Ary mifandraika amin'ny famelan-keloka sy fahasoavana ny fifandraisana - tsy amin'ny fanarahana an-tery.
Ohatra, raha tiako ny itiavan'ny vadiko ahy, dia mody manao azy ve aho? Raha nanao izany aho dia mety hanaraka ny fankatoavako ny fitondran-tenako, nefa azo antoka fa tsy ho afaka hanao azy ho tena tia ahy. Tsy azo terena ny fitiavana. Azonao atao ny manery ny olona hanao zavatra sasany.
Nasehon’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahafoizan-tena ny halehiben’ny fitiavany antsika. Naneho ny fitiavany lehibe tamin’ny alalan’ny famelan-keloka sy ny fahasoavana Izy. Tamin’ny fijaliana noho ny fahotantsika fa tsy antsika, dia nasehony fa tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavany (Romana 8,38).
Tian'Andriamanitra ny zanaka fa tsy andevo. Mila fifankatiavana am-pitiavana miaraka amintsika isika fa tsy tontolo feno duckhouse voatery manara-dalàna. Nataony olom-boafidy malalaka isika ary manana safidy malalaka - ary misy heviny lehibe aminy ny fanapahan-kevitra noraisintsika. Tiany isika hisafidy azy.
Nomen'Andriamanitra fahalalahana hanana fitondran-tena isika, araka ny heverintsika fa mety, ary mamela ny fahotantsika. Ataony io amin'ny safidiny malalaka. Izany no notadiaviny, ary izay no mitranga, tsy misy marimaritra iraisana. Ary na dia manana masombolom-banona aza isika, dia ho hitantsika ny dikan'ny fitiavany ary mitazona azy toy ny andro farany.
Inona àry no tokony hanakana antsika tsy hanota an-kalalahana? Tsy misy. Tsy misy na inona na inona mihitsy. Ary tsy nisy hafa mihitsy izany. Tsy nisakana na iza na iza tamin’ny ota mihitsy ny Lalàna rehefa naniry hanao izany izy (Galatiana 3,21-22). Ary noho izany dia nanota foana isika, ary navelan’Andriamanitra foana izany. Tsy nanakana antsika mihitsy Izy. Tsy ankasitrahany ny ataontsika. Ary tsy jereny mangina akory izany. Tsy ankasitrahany izany. Eny, mandratra azy izany. Ary na izany aza dia avelany foana izany. Izany no atao hoe fahafahana.
Rehefa milaza ny Baiboly fa manana ny fahamarinana ao amin'i Kristy isika, dia araka ny voasoratra izany (1. Korintiana 1,30; Filipianina 3,9).
Manana fahamarinana eo anatrehan’Andriamanitra isika, tsy avy amin’ny tenantsika, fa ao amin’i Kristy ihany. Maty ho an'ny tenantsika isika noho ny fahotantsika, nefa velona ao amin'i Kristy koa - ny fiainantsika dia miafina ao amin'i Kristy (Kolosiana). 3,3).
Raha tsy misy i Kristy dia tsy misy fanantenana ny zava-misy eto amintsika; raha tsy Izy dia amidy eo ambanin'ny ota isika ary tsy manana ho avy. Fa Kristy kosa namonjy antsika. Io no filazantsara - inona no vaovao tsara! Amin'ny alàny famonjena, raha manaiky ny fanomezam-pahasoavany isika dia mahazo fifandraisana vaovao tanteraka amin'Andriamanitra.
Noho ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tao amin'i Kristy ho antsika - ao anatin'izany ny famporisihany, na ny famporisihany, hatoky azy aza, dia ao amintsika i Kristy. Ary noho ny amin'i Kristy (satria miaro antsika Izy; manangana ny maty Izy), na dia maty aza isika noho ny ota, dia manana fahamarinana eo imason'Andriamanitra isika ary ekeny. Ary izany rehetra izany dia mitranga hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, tsy amin'ny alalantsika, fa amin'ny alalàn'Andriamanitra, izay mandresy antsika tsy amin'ny faneriterena, fa noho ny fitiavany, izay lasa hatramin'ny fahafoizan-tena, satria miseho amin'ny fanomezana ny tenany.
Tsy misy dikany ve ny lalàna?
Nohazavain’i Paoly mazava tsara ny dikan’ny lalàna. Mampiseho amintsika izany fa mpanota isika (Romana 7,7). Izany dia mampiseho fa andevozin’ny ota isika mba hohamarinina amin’ny finoana rehefa tonga i Kristy (Galatianina). 3,19- iray).
Ankehitriny, ndeha holazaina vetivety dia niatrika ny Fitsarana farany tao amin'ny orinasa ianao
Maharesy lahatra ny tenanao fa afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ianao satria ny mankatoa ny Ray any An-danitra foana no ezahinao. Ary noho izany, raha tokony hitafy ny akanjo mariazy dia miomana hatrany eo am-baravarana (ilay akanjo malalaka sy madio natao ho an'ireo olona voaloton'ny fahotana izay mahalala fa mila izany izy ireo), miakanjo ny akanjonao isan'andro, izay voamariky ny tsy tapaka ezaka, ianao amin'ny dingana iray amin'ny fidirana amin'ny sisiny dia mijanona eo amin'ny latabatra, miaraka amin'ny fofona maimbo miaraka aminao isaky ny mandeha.
Hamaly anao ny tompon-trano: "Eh, aiza ianao no mankamin'ny fofo tsy hiditra eto sy manompa ahy amin'ny fitafiana maloto eo imasoko rehetra?" Ary avy eo izy hanontany ny mpiasa: "Ahafohy ity mpisandoka ratsy fanahy ity ary atsipazo mahitsy!"
Tsy afaka manasa ny masontsika maloto amin'ny rano maloto isika, ny savony maloto ary ny lamba maloto antsika samirery ary manohy ny lalantsika amin'ny fiheverana diso fa madio ny tarehintsika maloto. Iray ny fomba iray handresena ny ota, ary tsy eo an-tananay.
Aoka tsy hohadinointsika fa maty noho ny ota isika (Romana 8,10), ary tsy afaka ny ho velona indray ny maty. Tokony hanosika antsika hatoky kosa fa hanadio antsika amin’ny fahotantsika i Jesosy (1. Petrus 5,10- iray).
Andriamanitra dia maniry antsika tsy hanota
Nomen’Andriamanitra antsika ny fahasoavana sy ny fanavotana be dia be mba hanafaka antsika amin’ny ota fa tsy hanome antsika fahafahana hanota amin’ny sitrapony. Izany dia tsy vitan’ny hoe manafaka antsika amin’ny fahamelohana amin’ny ota, fa koa mahatonga antsika hahita ny fahotana mitanjaka toy ny misy azy, fa tsy amin’ny endrika tsara tarehy izay natao hamitahana antsika. Ary noho izany dia azontsika atao koa ny mahafantatra sy manilika ny heriny mamitaka sy manambony tena izay ampihariny amintsika. Na izany aza, ny sorompanavotan'i Jesosy dia mitoetra ho antsika - na dia manohy manota aza isika, izay azo antoka fa hataontsika - mijoro tsy misy marimaritra iraisana (1. Johannes 2,1- iray).
Tsy manadino ny fahotantsika Andriamanitra, fa manameloka azy fotsiny. Tsy ankasitrahany ny fomba fiasa maloto sy tsy misaina, ny fahatsentsenantsika amin'ny fahatsapan-tena, na ny fihetsiktsika mandratra amin'ny fakam-panahy isan-karazany, avy amin'ny hatezerana mankany amin'ny fanirian'ny nofo sy ny avonavona. Matetika izy, avelany hitarika ny vokatry ny safidintsika irery ihany.
Na izany aza, tsy manidy antsika izy, izay nametraka ny finoantsika sy ny fitokisantsika azy (izay midika fa mitafy ny akanjo mariazy izay natolony ho antsika) (araka ny inoan'ny mpitory sasany) noho ny safidy ratsy ataontsika, avy ny mariaziny.
Rehefa sendra fahotana ianao teo amin'ny fiainanao, efa hitanao ve fa ny feon'ny fieritreretanao dia mampijaly ny feon'ny fieritreretanao mandra-pikatanao ny fahadisoanao amin'Andriamanitra? (Ary mety misy ny sasany izay tsy maintsy ekenao matetika.)
Maninona ianao no manao an'io? Moa ve ianao satria nanapa-kevitra ny "hanota amin'ny votoatin'ny fonao"? Na angamba aleo satria ao amin'i Kristy ny fonao ary tena malahelo mifanaraka amin'ny Fanahy Masina misy ianao mandra-piadananao amin'ny Tomponao indray?
Ny Fanahy Masina mitoetra ao anatiny, antsoina ao amin’ny Romana 8,15-17, “ambarao amin’ny Fanahinantsika fa zanak’Andriamanitra isika”. Raha manao izany ianao dia tsy tokony hanadino hevitra roa: 1. Ianao dia ny Fanahy Masin’Andriamanitra mihitsy no mijoro ho vavolombelona, ​​ao amin’i Kristy sy miaraka amin’ny olomasina rehetra dia zanaky ny Raintsika any an-danitra, ary 2. Ny Fanahy Masina, izay vavolombelon’ny tena maha-izy anao, dia tsy hitsahatra hampihozongozona anao raha te-hanohy ny fiainana ho toy ny mbola “nofo maty” ianao, toy ny tamin’ny andron’ny fanavotana anao tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy.
Aza manao hadisoana akory! Ny ota dia an'Andriamanitra sy fahavalonao, ary tsy maintsy miady amin'ny fototra. Na izany aza, tsy tokony hino mihitsy isika fa miankina amin'ny fahombiazantsika miady aminy ny famonjena antsika. Miankina amin'ny fandresen'i Kristy amin'ny ota ny famonjena antsika ary ny Tompontsika dia efa nanaisotra izany ho antsika. Ny ota sy ny aloka manaloka azy dia efa voatsipaky ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty, ary ny herin'ny fandresena izay hita taratra amin'ny zavaboary rehetra hatrany am-piandohan'ny fotoana ka hatramin'ny mandrakizay. Ny hany tokana teto an-tany izay naharesy ny ota dia ireo izay mitoky mafy fa i Kristy dia ny fitsanganany ary ny ain'izy ireo.
Andriamanitra dia mifaly amin’ny asa tsara ataon’ny zanany ( Salamo 147,11; Epifania 8,4). Faly Izy noho ny hatsaram-panahintsika sy ny hatsaram-panahintsika, ny fanati-pitiavana, ny zotom-pontsika amin’ny rariny, ny fahatsoram-po sy ny fiadanana (Hebreo). 6,10).
Tahaka ny asa tsara rehetra, ireo dia avy amin’ny asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika, izay manosika antsika hatoky sy ho tia ary hanome voninahitra an’Andriamanitra. Izy ireo dia mifamatotra tsy azo sarahina amin’ny fifankatiavana izay nidirany tamintsika tamin’ny alalan’ny fahafatesan’ny sorona sy ny fitsanganan’i Jesosy Kristy Tompon’ny fiainana tamin’ny maty. Ny asa sy ny asa toy izany dia mipoitra avy amin’ny asan’Andriamanitra ao anatintsika izay zanany malalany, ka tsy very maina na oviana na oviana izany (1. Korintiana 15,58).
Asan'Andriamanitra ao anatintsika
Ny fahazotoantsika hanao ny sitrapony no taratry ny fitiavan'ny Mpamonjy antsika, fa ny asa tsara ataontsika amin'ny anarany dia tsy mba hamonjy antsika ihany. Ao ambadiky ny fahamarinana aseho ao amin'ny tenintsika sy ny ataontsika izay mankatò ny lalàn'Andriamanitra dia Andriamanitra Izay miasa ao anatintsika miaraka am-pifaliana sy voninahitra mba hamoa voa tsara.
Hadalana àry raha te hilaza amin’ny tenantsika hoe inona no ataony ao anatintsika. Hadalana toy izany koa ny fiheverana fa ny ran’i Jesosy, izay mamafa ny ota rehetra, dia hamela ny sasany amin’ny fahotantsika hijanona. Fa raha noheverintsika izany, dia mbola tsy ho fantatsika hoe iza io Andriamanitra telo izay iray tsitoha mandrakizay io - ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina - izay nahary ny zavatra rehetra ary nanavotra antsika tamin'ny ran'ny Zanany, ny Fanahy Masina, ny Fanahy Masina. antsika sy manavao ny zavaboary rehetra, eny, iombonantsika amin’izao rehetra izao (Isaia 65,17) noforonina indray tamin’ny fitiavana lehibe tsy hay lazaina (2. Korintiana 5,17).
Na dia mandidy antsika hanao izay tsara sy tsara aza Andriamanitra dia tsy mamaritra ny famonjentsika Izy araka ny fanantenantsika na tsia. Izay mahasoa ho antsika ihany koa satria raha nanao an'izany izy dia nolavina daholo isika fa tsy ampy.
Mamonjy antsika amin’ny fahasoavana Andriamanitra ary afaka misitraka ny famonjena amin’ny alalany isika rehefa mametraka ny fiainantsika manontolo eo an-tanany sy mitodika Aminy ary matoky Azy irery ihany fa hanangana antsika amin’ny maty (Efesiana). 2,4-10; Malagasy 4,10).
Ny famonjena antsika dia Ilay mirakitra ny anaran’ny olona ao amin’ny bokin’ny fiainana, ary efa nosoratany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry ny anarantsika rehetra tao amin’io boky io (1. Johannes 2,2). Mampalahelo fa tsy te hino izany ny sasany; satria raha natoky ny Tompon’ny fiainana izy ireo dia ho tonga saina fa ny fiainana izay sahirana hovonjena dia tsy ny tena fiainana velively, fa ny fahafatesana, ary ny tena fiainany miaraka amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra dia miafina ary miandry ny haseho. Ny Raintsika any an-danitra aza dia tia ny fahavalony, ary tiany izy ireo, tahaka ny mpiara-belona aminy, hitodika Aminy sy hiditra ao amin’ny fahasambaran’ny fanjakany (1 Tim. 2,4... 6).
Hodinihintsika izany. Nanontany izy ireo hoe: "Raha namela ny fahotako rehetra Andriamanitra - ny taloha sy ny zavatra ataoko ankehitriny na amin'ny ho avy - inona no tokony hanakana ahy tsy hanota hatrany amin'ny atin'ny foko? Ny tiako lazaina, tsy misy dikany ve ny lalàna ho an'ny kristianina? Moa ve Andriamanitra tsy hiraharaha izany rehefa manota? Tsy te-hanajanona ahy tsy hanota intsony ve izy? »
Tsy misy na inona na inona hanakana antsika tsy hanao ota. Tsy hafa mihitsy. Nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika ary mifantoka amin'izany. Tiany isika ary maniry hanangana fifanekem-pitiavana amintsika; ny fifandraisana toy izany, dia mivoaka raha tsy avy amin'ny fanapahan-kevitra maimaimpoana miorina amin'ny fahatokisana sy ny famelan-keloka ary tsy nateraky ny fandrahonana na fanarahana an-tery.
Tsy robots izahay na misy mpilalao virtoaly amin'ny lalao efa voafaritra mialoha. Namboarina ho tena nisy, tsy nisy namorona Andriamanitra tamin'ny fahalalahany noforoniny manokana, ary tena misy ny fifandraisan'ny tena manokana eo amintsika sy Aminy.
Lavitra ny tsy misy dikany ny lalàna; Izy io dia mampahafantatra antsika tsy an-kolaka fa mpanota isika ary tsy mifanalavitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Mamela antsika hanota ny Tsitoha, saingy tsy hanadino izany mihitsy izy. Noho izany dia tsy nampiraviravy saina hiala amin’ny fahafoizan-tena aza izy mba hanavotana antsika amin’ny ota. Izy io no mahatonga fanaintainana antsika sy ny mpiara-belona amintsika ary manimba antsika. Miorina avy am-po iray voafatotry ny tsy finoana sy fikomiana feno fitiavan-tena manohitra ny loharanon'ny fiainantsika sy ny fisiantsika. Izany dia manala antsika ny tanjaka hitodika any amin'ny tena fiainana, ny tena misy, ary mitazona antsika ho voafandrika ao amin'ny haizin'ny fahafatesana ary tsy misy na inona na inona.
Maharary ny ota
Raha tsy no hitanao ny fahotanao dia manjary toy ny helo ny fahotana - ara-bakiteny - satria amin'ny tena toetrany dia ny tena helo. Ka mitombina tsara amin'ny "manota amin'ny atin'ny fonao" izany rehefa mampiditra ny tananao ao amin'ny mpanao lalàna. "Eny," henoko nisy niteny, "raha efa voavela heloka isika, dia mety hanitsakitsa-bady koa".
Mazava ho azy, raha tsy mampaninona anao ny miaina ny tahotra lalandava ny mety ho voka-dratsy, atahorana ny fitondrana vohoka tsy irina na ny aretina tsy mahaliana, ary ny alahelo ho an'ny ankohonanao, ny fanavakavahana ny tenanao, ny famoizanao ny namanao mandatsa-dra amin'ny fandoavana fikojakojana, hotratrin'ny feon'ny fieritreretana meloka, ary mety hanana vady, sipa, sakaiza, na raim-pianakaviana be loatra.
Misy voka-dratsy, vokatry ny fiantraikany ratsy ary noho izany antony izay Andriamanitra dia miasa ao aminao hampifanaraka tsara ny sarin'i Kristy. Afaka mihaino ny feony ianao ary miasa amin'ny tenanao, na afaka manohy mampiditra ny herinao amin'ny fanaovana zavatra tsy takatry ny saina.
Ankoatr'izay, tsy tokony hohadinointsika fa ny fahotana izay matetika ieritreretantsika rehefa miteny hoe "manota amin'ny sitrapo" dia ny tendron'ny iceberg fotsiny. Ahoana kosa ny hoe rehefa "fotsiny" dia mitondra tena amin'ny fitiavan-tena, tia tena na manelingelina? Ahoana raha lasa tsy mahay mankasitraka isika, midika zavatra sa tsy manampy rehefa tokony hanao izany isika? Ahoana ny momba ny alahelontsika hafa, ny fialonana amin'ny asany, ny akanjo, ny fiara na ny tranony, na ny eritreritra maizina mifamatotra amintsika? Ahoana ny momba ny kojakoan'ny biraon'ny mpampiasa, izay manankarena ny tenantsika, ny fandraisana anjara amin'ny fifosana na ny fanimbana ny mpiara-miasa na ny zanatsika? Ka afaka mandroso sy mandroso isika.
Fahotana ihany koa ireo, ny sasany lehibe, ny sasany somary kely, ary fantatrao ve? Hanohy hanao araka izay irinay izahay. Koa tsara raha fahasoavana no namonjen’Andriamanitra antsika fa tsy ny asantsika, sa tsy izany? Tsy mety raha manota isika, nefa tsy misakana antsika tsy ho meloka. Tsy tian’Andriamanitra hanota isika, kanefa fantany tsara kokoa noho isika fa maty noho ny ota isika ary mbola hanota mandra-pahariharin’ny tena fiainantsika miafina ao amin’i Kristy — voavotra sy tsy misy ota — amin’ny fiverenany (Kolosiana). 3,4).
Miaina amin'ny maha mpanota an'i Kristy
Ny mifanohitra amin’izany, noho ny fahasoavana sy ny hery tsy manam-petra avy amin’ilay Andriamanitra velona mandrakizay sy be fitiavana mandrakizay, izay nomena antsika tamim-pahalalahan-tanana, dia maty tsy tra-drano noho ny ota ny mpino nefa mbola velona ao amin’i Jesosy Kristy (Romana). 5,12; 6,4-11). Na dia eo aza ny fahotantsika dia tsy mandeha amin’ny lalan’ny fahafatesana intsony isika satria mino ny fitsanganana amin’ny maty ao amin’i Kristy ary efa nandray izany ho antsika (Romana 8,10-11; Efesianina 2,3-6). Amin'ny fiverenan'i Kristy, na dia ny akorandriaka mety maty aza dia mahatratra ny tsy fahafatesana, dia ho tanteraka izany (1. Korintiana 15,52-53).
Fa ny tsy mino kosa dia manohy mandeha amin’ny lalan’ny fahafatesana, tsy afaka mankafy ny fiainany miafina ao amin’i Kristy (Kolosiana 3,3) mandra-pihavin’izy ireo koa; ny ran’i Kristy koa dia hahafoana ny fahotany, nefa tsy hatoky afa-tsy izy ireo fa hanafaka azy ireo amin’ny maty izy raha afaka mino ny vaovao mahafaly fa Izy no mpamonjy azy ka mitodika Aminy. Koa ny tsy mpino dia voavotra tahaka ny mino - Kristy maty ho an'ny olona rehetra (1 Jao 2,2) - mbola tsy fantatr'izy ireo fotsiny izany, ary noho izy ireo tsy mino izay tsy fantany dia mbola miaina ao anatin'ny tahotra ny fahafatesana izy ireo (Hebreo 2,14-15) ary amin’ny fisasarana zava-poana eo amin’ny fiainana amin’ny fisehoany tsy marina rehetra (Efes 2,3).
Ny Fanahy Masina dia manao izay mino araka ny endrik’i Kristy (Romana 8,29). Ao amin’i Kristy dia tapaka ny herin’ny ota ary tsy voafandrika ao anatin’izany intsony isika. Na dia izany aza, dia mbola malemy isika ka manome malalaka ny ota (Romana 7,14-29; Hebreo 12,1).
Satria tia antsika izy, dia miahy ny fahotantsika Andriamanitra. Tena tia an'izao tontolo izao tokoa izy ka naniraka ny zanany lahy mandrakizay mba tsy hitoetra ao amin'ny haizin'ny fahafatesana izay rehetra mino azy, izay vokatry ny ota, fa hanana fiainana mandrakizay ao aminy. Tsy misy na inona na inona afaka hampisaraka anao amin'ny fitiavany, eny fa na ny fahotanao aza. Matokia azy! Hanampy anao handeha amin'ny fankatoavana Izy ary hamela anao amin'ny fahotanao rehetra. Izy no Mpanavotra anao amin'izay sitrapony ary tonga lafatra amin'ny asany.